San Htun's Diary: May 2011
(Forward Mail တွေထဲက ကြိုက်တာလေးတွေကို ဘလော.ကနေ မျှဝေလိုက်ပါတယ်။)
တစ်ခါတုန်းကပေါ့။ အထက်မြန်မာပြည်ရှေးဟောင်းမြို့နားက ရွာလေးတစ်ရွာမှာ တစ်ရွာလုံးက ချစ်ခင်လေးစားကြတဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား၊ ကျောင်းဆရာလေးတစ်ယောက်ရှိသတဲ့။ သူကကျောင်းပိတ်ရင် ရွာမှာ ကလေးတွေကို စာသင်ပေးတယ်။ ကျောင်းဖွင့်ရင်တော့ ရန်ကုန်မှာ ကျောင်းပြန်တက်ပေါ့။ အင်္ဂလိပ်စာတတ်ရင် ဘုရားဒကာထက် အထင်ကြီးလေးစားခံရတဲ့ အချိန်ကာလမျိုးမှာ ကလေးတွေကို အလကားစာသင်ပေးနေတော့ ရွာရဲ့ အသည်းနှလုံး ဆိုလဲ မမှားဘူးပေါ့လေ။ ဒီကျောင်းဆရာလေးရဲ့ အိမ်ကလဲ စီးပွားရေးတောင့်တင်းတယ်။ ရုပ်ရည်ကလဲ ဖြူဖြူသန့်သန့်ဆိုတော့ သမီးရှင်တို့ မျက်စိကျတဲ့ ယောင်္ကျားလေးမျိုးပေါ့။ သူတို့ အိမ်မှာ လေးတန်းအောင်ပြီး ကတည်းက ခေါ်ထားတဲ့ ဆွေမျိုးနီးစပ်ထဲက အသားမဲမဲ ရွက်ကြမ်းရေကြို ကောင်မလေးတစ်ယောက်လဲ ရှိတယ်။ အဲဒီကောင်မလေးကလဲ ဒီကျောင်းဆရာလေးကို ရင်ထဲက ကျိတ်ပြီး သဘောကျနေတာပါ။
ဒီလုိုနဲ့ပဲ တစ်အိမ်ထဲအတူနေ ဒီကျောင်းဆရာလေးနဲ့ ကောင်မလေးနဲ့ ညိကြရော ဆိုပါတော့။ ဒီတော့ ကျောင်းဆရာလေးက လူကြီးတွေကို အသိမပေးပါနဲ့ဦး။ ကျောင်းပြီးတဲ့ အခါမှ လက်ထပ်ကြမယ်လို့ စီစဉ်သတဲ့။ ဒါကိုကောင်မလေးက ကျောင်းပြီးတဲ့ အထိစောင့်ရင်သူ့ကိုပစ်သွားမှာပဲဆိုပြီး ရှိသမျှ ကြီးတော်တွေ၊ ဒွေးလေးတွေ အကုန်ကြေငြာမောင်းခတ်လိုက်သတဲ့။ မယူရင်မရတော့ပါဘူး၊ ဘာညာပေါ့လေ။ ကျောင်းဆရာလေးရဲ့ မိဘတွေလဲ စိတ်ဆိုးကြ၊ ဒေါသတွေကြီးနဲ့ ဆွေမျိုးအုပ်စုတစ်ခုလုံး ပွက်လောရိုက်သွားတာပေါ့။ နောက်ဆုံးတော့လဲ ရှေးတောရွာသူတို့ရဲ့ စိတ်နဲ့ ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေး စဉ်းစားမနေတော့ပဲ ပေးစားလိုက်ကြရော ဆိုပါတော့။ မင်္ဂလာဆောင်တဲ့ ညမှာပဲ သတို့သားလောင်းက တစ်ခါမှ မသောက်ဘူးတဲ့ အရက်တွေသောက်၊ ဘယ်ခွေးမှ လူမထင်ဘူးကွ ဆိုပြီး ပြန်လာသတဲ့။ ပြီးတော့ ငါ့ဘ၀ကို ဖျက်ဆီးတဲ့ မိန်းမ လာခဲ့ ဆိုပြီး ခြေသလုံးကျော်ကျော်ထိ ရှည်တဲ့ ကောင်မလေးရဲ့ ဆံပင်ကို တရွတ်ဆွဲပြီး ရွာကိုပတ်ပါလေရော။ အမြဲ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး ချိုချိုသာသာ ပြောလေ့ရှိတဲ့ လူက ပါးစပ်က မကြားဝံ့၊ မနာသာတွေ ဆဲဆိုလိုက်တာ တစ်ရွာလုံး ဘယ်သူမှလဲ မဆွဲရဲ၊ဲဆွဲ တဲ့လူကို သတ်မယ်ဆိုပြီး ဓါးနဲ့ကလဲ ကြိမ်းထားသေးတော့၊ နှိပ်စက်နေတာကို ဒီအတိုင်း ကြည့်နေလိုက်ရသတဲ့။
အဲဒီမင်္ဂလာဆောင်တဲ့ နေ့ကစပြီး ပြောင်းပြန်ကြီး ပြောင်းလဲသွားလိုက်တာ တစ်ရွာလုံးက အော်ကြောလန်တဲ့ အဆင့်ထိရောက်ပါလေရော။ နေ့တိုင်းနီးပါး ငါ့ဘ၀ကို ဖျက်ဆီးတဲ့ မိန်းမ၊ ငါအမုန်းဆုံး မိန်းမနဲ့ ရိုက်နေတာတဲ့။ ကြာလာတော့ ညနေမိုးချုပ်တာနဲ့ အဲဒီ မိန်းမလဲ တခြားအိမ်မှာ သွားပုန်းနေရတာပေါ့။ အိမ်မှာ ရှာလို့ မတွေ့ရင် ဓါးဆွဲပြီး လက်ခံထားတယ်လို့ ထင်တဲ့ အိမ်တွေမှာ ဓါးနဲ့ကြိမ်း၊ အိမ်ရှေ့ကသစ်ပင်တွေခုတ်နဲ့၊ ဆဲလိုက်တာလဲ မိုးမွှန်နေတော့ တခါတလေများ တခြားရွာအထိ သွားပုန်းနေရသတဲ့။ မကျေနပ်တာလေး တစ်ခုနဲ့ ဘ၀တစ်ခုလုံးနဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တာ အရက်သမား လူရမ်းကားကား လုံးလုံးဖြစ်ရောပေါ့။ နေ့လည်ဘက်ဆိုရင်လဲ ဘယ်သူ့ကိုမှ စကားဟဟမပြောတော့ဘဲ ငူငူကြီးထိုင်နေသတဲ့။ ဒီလိုနဲ့ လင်ဆိုးမယား တဖားဖားဘ၀နဲ့ သမီးလေးတစ်ယောက်ရသတဲ့။ အဲဒီသမီးလေးကိုလဲ တစ်ခါမှ သေတဲ့အထိ သမီးလို့ မခေါ်ခဲ့ဘူးတဲ့။ ဟဲ့ကောင်မလေးလို့ ပဲခေါ်ပြီး တခါမှလဲ မချီဘူး။ ချော့မြူတာလဲ မရှိ၊ သူနဲ့ မဆိုင်သလိုပဲတဲ့။
ယောင်္ကျားတစ်ယောက်ရဲ့ အသုံးကျမှု၊ မကျမှုကို ပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ယောင်္ကျားတွေဟာ သူတို့လက်မထပ်ချင်သေးတဲ့အချိန်မှာ လက်ထပ်လိုက်ရတဲ့အခါ၊ လက်ထပ်ချင်တဲ့ အခါ လက်မထပ်ရတဲ့အခါ ဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်လား ကျွန်တော်မသိပါဘူး။ မိန်းမတစ်ယောက်ကို သူတို့ယူချင်တဲ့ အချိန် အဆင်သင့်ဖြစ်ရမယ် ဆိုတဲ့ အတ္တမျိုးရှိတတ်လား မတွေးတတ်ပါဘူး။ သူ့စိတ်ဓါတ်ကိုလဲ မဝေဖန်လိုပါဘူး။ အဓိက ကတော့ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကံကြမ္မာကို ပြောချင်တာပါ။ တစ်ရွာလုံးလေးစားကြည်ညိုတဲ့ ကျောင်းဆရာကို ယူလဲ အရက်သမား မယားဖြစ်သွားနိုင်သလို တစ်ရွာလုံး အော်ကြောလန်ကို ယူလဲ အံ့သြလောက်အောင် လိမ္မာသွားလို့ ဘုရားဒကာ၊ ကျောင်းဒကာဖြစ်သွားနိုင်တယ်လေ။ အားလုံးက ကြောက်စရာကောင်းပြီး မမြင်နိုင်တဲ့ ကံကြမ္မာတွေပေ့ါ။ တကယ်တော့ အိမ်ထောင်ရေးဆိုတာ အမြင့်ဆုံး တန်ဘိုးနဲ့ ထပ်ပြီးကံကြမ္မာနဲ့ လောင်းရတဲ့ စိန်ခေါ်ပွဲ တစ်ခုပါဘဲ။
ကောင်မလေးတစ်ယောက်လဲ ဒီလိုပဲ။ ၁၀ တန်းဖြေဘို့ နယ်ကနေ မြို့ကိုလာနေရင်းက ဆေးကျောင်းမှာ အလုပ်လုပ်တဲ့ ယောင်္ကျားတစ်ယောက်နဲ့ တွေ့ပါလေရော။ ဆေးကျောင်းက ဓါတ်ခွဲခန်းမှာ လုပ်တယ်ဆိုတာပဲ သိပြီး တွဲနေလိုက်တာ လက်ထပ်ဖို့ အိမ်ကို ပြောတော့ ပွဲရုံ ပိုင်ရှင် မိဘတွေက သဘောမတူတာနဲ့ လိုက်ပြေးပါလေရော။ လက်ထပ်ပြီးမှ သေချာသိရတာက ဆေးကျောင်းက ဓါတ်ခွဲခန်းမှာ အလောင်းတွေ ခွဲရ၊ ဖြတ်ရတဲ့ အလုပ်သမားပါ။ ဆေးကျောင်းကို လှူတဲ့ အလောင်းတွေကို ဖြတ်၊ ဆေးစိမ်သင့်တာစိမ်၊ လွှတ်ပစ်သင့်တာ လွှတ်ပစ်၊ တစ်ခါတလေ ဆေးကျောင်းသားတွေက စာကျက်ဘို့ အရိုးခြောက်တွေ ဘာတွေ လိုချင်ရင် သူ့ဆီမှာ ၀ယ်ရတာပေါ့။ နောက်ပြီး သေပြီးသားလူတွေ ကြာကြာအထားခံအောင် ဆေးထိုးတဲ့ အလုပ်လည်း လုပ်သေးတယ်။ တစ်ခါတလေများ အိမ်ပြန်မိုးချုပ်တဲ့ အခါ သူလမ်းထဲဝင်လာရင် တိုက်ဆိုင်တာလားမသိ၊ လမ်းပေါ်မှာ ရှိတဲ့ ခွေးတွေက ဆွဲဆွဲငင်ငင်အူလို့၊ လူကလည်း သွေးညီနံ့တွေနဲ့၊ အော်ဒါမှာထားတဲ့ ကျောင်းသာရှိရင် လူရိုးထုပ်ကြီးက ပါသေးတယ်။ အလုပ်ဟူသမျှ ဂုဏ်ရှိစွပါ။ အပြစ်မဆိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီကောင်မလေးသာ ဒါတွေကို ကြိုသိခဲ့ရင် သူ့ကံကြမ္မာက တစ်မျိုးတစ်မည် ပြောင်းသွားနိုင်တယ်လို့ ဆိုချင်တာပါ။ အိမ်ထောင်ကျပြီးမှ ကိုယ့်မိဘထားနိုင်တာထက် များစွာ နိမ့်ကျတဲ့ ဘ၀ကို ရောက်တဲ့အပြင် မသာဆေးထိုးပြီး လူရိုးထွင်ရောင်းတဲ့ လူမှန်းသိရတဲ့အခါ ကိုယ်ချစ်မိသွားတဲ့ လူတစ်ယောက်အတွက်၊ ကိုယ်ကံကြမ္မာအတွက် ဘာလုပ်လို့ရတော့မှာလဲ။
ဒီထက်ဆိုးတဲ့ နောက်တစ်ယောက်လဲ ရှိသေးတယ်။ ချစ်သူ ကြိုက်သူ ၀ိုင်းဝိုင်းလည်နေတဲ့ ကြားက လက်ကလေးတောင်မကိုင်၊ ချစ်သူကို တန်ဘိုးထားပြီး သက်သတ်လွတ်စားနေတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို သူတော်ကောင်းလေး ဆိုပြီး ရွေးချယ်လိုက်သတဲ့။ ဒီလူက အိမ်ထောင်ကျပြီးတော့လဲ တကယ် သက်သတ်လွတ်စားတာပါ။ ဆိုးတာက မိန်းကလေး လုပ်သူက မကောင်းတဲ့ မိန်းမကိုသာ သွားရှာပါတော့လို့ တောင်းတောင်းပန်ပန်ပြောယူရလောက်အောင် ကာမကိုလည်း စားတာပါ။ နောက်ဆုံးတော့ ဘယ်သူမှ မကယ်နိုင်တဲ့ အဆုံး ကောင်မလေးလည်း အိမ်ကထွက်ပြေးလိုက်တာ သေလား၊ရှင်လား သတင်းအစအနတောင် မရတော့ဘူးတဲ့လေ။
မိန်းမတစ်ယောက်အိမ်ထောင်ကျပြီးတဲ့နောက်မှာ ကြေကွဲစွာ လက်ခံလိုက်ရတဲ့ ကံကြမ္မာတွေ၊ နာကျည်းခံပြင်းစွာ လက်ခံလိုက်ရတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ၊ ဆုပ်လည်းစူး စားလည်းရူးတဲ့ ဘ၀တွေ၊ ဆုပ်လည်းနွေး စားလည်းအေးတဲ့ ဘ၀တွေ အများကြီး ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပြီး ဘ၀မှာ ပြီးပြည့်စုံသွားပြီလို့ ခံစားရမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ယောင်္ကျားတွေဘက်ကလည်းဒီလိုပါဘဲ။ အိမ်ထောင်ကျပြီးမှ ပိုတော်လာတဲ့ ယောင်္ကျားတွေရှိသလို၊ အရည်အသွေးကျသွားတာတွေလည်း ဒုနဲ့ဒေးပါဘဲ။ လူနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီး ဘ၀တစခုကို တည်ဆောက်တဲ့အခါ ဘေးမှာ တစ်ချိန်လုံးရှိနေတဲ့ တစ်ဦးတည်းသော အဖော်ရဲ့ အားပေးမှု၊ ကူညီမှု၊ ပါရမီဖြည့်နိုင်မှု တွေက ဦးဆောင်နေတဲ့ ယောင်္ကျားအတွက် အရေးကြီးတဲ့ အင်အားပါပဲ။
အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေတောင် ကြာကြာပေါင်းရင် တဖြည်းဖြည်း သူ့စိတ် ကိုယ့်စိတ် ဓါတ်ကူးတတ်တယ်မဟုတ်လား။ ကိုယ့်ရဲ့ မသိစိတ်က တဖြည်းဖြည်း သူလုပ်သလို၊ သူပြောသလို လုပ်မိ၊ ပြောမိ နေတာမျိုးလေ။ လင်မယား ဆိုတာ အရင်းနှီးဆုံး တစိမ်းဆိုတော့ ယောင်္ကျားတစ်ယောက်ဆီက ဘ၀ကို ရင်ဆိုင်ရဲ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပီပီပြင်ပြင် ချရဲတဲ့ သတ္တိမျိုးတွေ မိန်းမဆီ ဓါတ်ကူးတာက တော်ပါသေးရဲ့။ မိန်းမဆန်လွန်းတဲ့ မိန်းမတွေမှာ ရှိတတ်တဲ့ မနာလိုဝန်တိုစိတ်တွေ၊ ရှေ့တစ်မျိုး ကွယ်ရာတစ်မျိုးနဲ့ အတင်းပြောတတ်တဲ့ စိတ်တွေ၊ ယောင်္ကျားဆီ ဓါတ်ကူးကုန်ရင်တော့ ပြီးပါလေရော။ အသွင်မတူတာတွေ ညှိရင်းညှိရင်းနဲ့ မကောင်းတာတွေပဲ ကျန်ခဲ့ရင် ဒုက္ခ။ အရမ်းအောင်မြင်တဲ့ ယောင်္ကျားတစ်ယောက်ရဲ့ နောက်မှာ သိပ်တော်တဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ရှိတယ်လို့ ဆိုထားတယ် မဟုတ်လား။
ကျွန်တော်အမြင်နဲ့ ပြောရရင်တော့ တချို့ယောင်္ကျားတွေက ကျွန်နဲ့တူသော မိန်းမကို ရတယ်။ ဆိုလိုတာက အိမ်မှုကိစ္စတွေလုပ်မယ်။ ကလေးမွေးမယ်။ ယောင်္ကျားကို ပြုစုမယ်။ ပေးသလောက်ပိုက်ဆံနဲ့ လောက်အောင်သုံးမယ်။ ယောင်္ကျားရဲ့ အလုပ်မှာ ရှိနိုင်တဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ၊ ပြဿနာတွေအတွက် သူမဖြေသိမ့်ပေးနိုင်ဘူး။ အကြံဥာဏ်မပေးနိုင်ဘူး။ သူသိတာက ယောင်္ကျားခိုင်းရင်လုပ်မယ်။ ပေးရင်ယူမယ်။ ကျွေးရင်စားမယ်။ ဒါပဲပေ့ါ။
တချို့ယောင်္ကျားတွေကျတော့ အလုပ်ရှင်နဲ့တူသော မိန်းမကိုရတယ်။ သူများကားစီး စီးချင်ပြီ။ သူများတိုက်ဆောက် ဆောက်ချင်ပြီ။ ယောင်္ကျားကို ရှာပါလား။ လုပ်ပါလား။ အလုပ်ရှင်က အလုပ်သမားကို ခိုင်းသလိုမျိုး အချိန်မဖြုန်းနဲ့၊ အပိုမသုံးနဲ့ ဆိုတဲ့ မိန်းမမျိုးတွေပေ့ါ။
တချို့ကျတော့ ဘုရင်မနဲ့ တူတဲ့ မိန်းမကို ရတယ်။ ရှာသမျှ ပိုက်ဆံအကုန်အပ်ရပြီး နေရာတကာ သူပြီးမှ ပြီးရတယ်။ ဘာပဲလုပ်ချင်လုပ်ချင် အသေးအဖွဲကအစ သူ့မျက်နှာအရိပ်အကဲ ကြည့်ပြီး အတည်ပြုချက်ယူရတယ်။ ချစ်မြတ်နိုးလွန်းလို့ အလိုလိုက်နေရတာမျိုး မဟုတ်တော့ဘဲ အနိုင်ကျင့်ခံနေရတဲ့ ဘ၀မျိုးပါ။ ဘ၀မှာ ပျော်ရွှင်သင့်သလောက် ပျော်ရွှင်ခွင့် မရတဲ့ ယောင်္ကျားမျိုးတွေပေါ့။
တချို့ကျတော့ မိတ်ဆွေနဲ့ တူသော မိန်းမကို ရတယ်။ ကိုယ့်ကို အစစ အရာရာ ကူညီပေးနိုင်သလို သူကိုယ်တိုင်မှာလည်း ကိုယ်နဲ့ သိပ်မကွာတဲ့ အရည်အချင်းတွေရှိတယ်။ ကိုယ့်ကို လက်တွဲခေါ်ယူနိုင်ပြီး ဟာသဥာဏ်လည်းရှိတယ်။ ဘ၀ကို စိတ်လက်ပေါ့ပါးစွာ လျှောက်လမ်းခွင့်ကိုပေးတဲ့ မိန်းမမျိုးပေါ့။
တချို့ကျတော့ ချစ်တီးနဲ့ တူသောမိန်းမကိုရတယ်။ ပိုက်ဆံကို အရမ်းမက်မော၊ သူလည်းရှာ၊ ယောင်္ကျားကိုလည်း ရှာခိုင်း၊ ပြီးရင် သူတို့ရဲ့ လက်သုံးစကားက ပိုက်ဆံသာရမယ်ဆို ယောင်္ကျားတောင် ပေါင်လိုက်ချင်သတဲ့လေ။
တချို့ကျတော့ မိခင်နဲ့တူသော မိန်းမကိုရတယ်။ နွေးထွေးတဲ့ မေတ္တာနဲ့ ကိုယ့်ကို နားလည်ပေးနိုင်သလို အခက်အခဲ တစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်လာရင်လည်း မိခင်တစ်ယောက်က သားအပေါ်မှာထားတဲ့ မေတ္တာမျိုးနဲ့ ရင်ဆိုင်ရပ်တည်ပေးနိုင်တယ်။ လဲကျတဲ့အခါ ညင်သာစွာ ထူပေးနိုင်သလို အောင်မြင်တဲ့အချိန်မှာလည်း သူများအလဲမထိုးနိုင်အောင် ဂရုစိုက် တည့်မတ်ပေးတယ်။ အရာရာကို ထပ်တူနီးပါး ခံစားနားလည်ပေးနိုင်တဲ့ နှလုံးသားကို ပိုင်ဆိုင်တယ်။ ဖြတ်ထိုးဥာဏ်ကောင်းပြီး ပြဿနာတော်တော်များများကို သိမ်မွေ့စွာဖြေရှင်းနိုင်တယ်။ ယောင်္ကျားကိုယ်တိုင်ကလည်း မိန်းမဖြစ်သူကို လေးစားချစ်ခင်စွာမြတ်နိုးတယ်ဆိုရင်တော့ ဘုရားသခင်ပေးတဲ့ ဆုလာဒ်ကိုရတဲ့ ယောင်္ကျားမျိုးပေါ့ဗျာ။
ကိုယ့်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုက ကိုယ့်ဘ၀တစ်ခုလုံးကို မသိမသာ ဖြေးဖြေးချင်း ပြောင်းလဲသွားနိုင်တဲ့အရာ၊ ဘာတွေဘယ်လိုပြောင်းလဲမယ်ဆိုတာ တိတိကျကျဘယ်သူမှ မသိနိုင်တဲ့အရာ၊ အကောင်းဆုံးဆိုတာကို ကိုယ်သတ်မှတ်တဲ့ စံနဲ့ လွပ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်လဲ ပေးထားတဲ့ အရာ၊ အချစ်ဆိုတာကို ဓါးစာခံလုပ်ပြီး ရဲရဲကြီးစွန့်စားကြည့်ကြတဲ့ အရာ၊ ပြီးသွားတဲ့ အခါ တိတ်ဆိတ်စွာ လူမသိ၊ သူမသိ တိတ်တိတ်လေး ကြေကွဲရတဲ့ အရာ၊ ဒါမှမဟုတ် ပွင့်လင်းစွာ ပျော်ရွှင်ခွင့်ရတဲ့အရာ၊ ဒါမှမဟုတ် မချိသွားဖြဲ ဖြစ်ကြရတဲ့ အရာ၊ ထိုထိုသော အရာများ ပေါင်းဆုံရာ လူ့ဘ၀ရဲ့ တစ်ခုတည်းသော အရသာကတော့ အိမ်ထောင်ရေးပါဘဲ။
အောင်မြင်တဲ့ အိမ်ထောင်တစ်ခုကို ခိုင်ခိုင်မာမာတည်ဆောက်ထားနိုင်တဲ့ အစ်ကိုကြီးတစ်ယောက်ကို လျှို့ဝှက်ချက်မေးကြည့်တာကတော့ ယောင်္ကျားလေးရော မိန်းကလေးရော နှစ်ယောက်စလုံးက “ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျေကျေနပ်နပ်ကြီး (ကျေကျေနပ်နပ်ကြီးနော်) သည်းခံခွင့်လွှတ်နားလည်ကြမယ်ဆိုတဲ့ အချစ်မျိုးနဲ့ ချစ်နိုင်ပြီဆိုမှ အိမ်ထောင်ပြုပါ” တဲ့။ ဒီနေ့အထိ ကျွန်တော် ကြားဖူးသမျှထဲမှာတော့ သူ့အဖြေက အကောင်းဆုံးပါဘဲ
စာဖတ်ခြင်းကြောင့် အသိဉာဏ်ပညာ ပြည့်စုံသူ ဖြစ်နိုင်တယ်။
အချိန်ကို တန်ဖိုးရှိစွာ အသုံးချပါ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ နေတုန်းကတော. ငယ်လည်: ငယ်သေး ကျောင်းစာတွေနဲ. နပန်:လုံးနေရတော. နိုင်ငံရေးဆိုတာ ကိုယ်နဲ. မဆိုင်သလို အဝေးမှာပါ။ ရန်ကုန်က သတင်းစာတွေမှာ ဖတ်ရတာနဲ. နိုင်ငံခြား အသံလွင့်သတင်းဌာနတွေက လွင့်တာက တခြားစီ။ နိုင်ငံခြားကို ရောက်တော. သတင်းအမှန်တွေ သိရတော.မှပဲ သိတော.တယ် ဘာကြောင့် အန်တီစုကို တကမ္ဘာလုံးက လေးစားကြမှန်:။ အန်တီစုရဲ. နိုင်ငံရေး ယုံကြည်ချက်တို. ဘာတို.တော. တို.ဦးနှောက်လေးနဲ. ဝေဖန်ပိုင်:ခြားဖို. ညဏ်မမှီလှပါဘူး။ မြန်မာပြည်မှာ နေတဲ. ၂၁နှစ်မှာ ၁၅နှစ်လောက်က နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ကျခံနေရတာ။ နေအိမ်ကနေ ဘယ်မှ မထွက်ရ ဘယ်သူ့နဲ. မတွေ့ရဘဲ ၁၅နှစ်လောက် အိမ်ထဲမှာ နေနိုင်ပါသလား။
ဟင့်အင်း မနေနိုင်ပါဘူး မိသားစုနဲ. ချစ်တဲ. သူငယ်ချင်းတွေနဲ. မတွေ့ရ စကားမပြောရဘဲ နေခိုင်းရင် တို.အတွက်တော. သေမိန့်ကျသလိုပါပဲ။ အိမ်ထဲမှာ တနေ့လောက်များ ကုပ်နေရရင် ခေါင်းကိုက်ပြီ: နေမကောင်းချင် ဖြစ်လာရော။ ၁၅ နှစ်တော. မပြောနဲ. တပတ်နဲ.တင် သေသွားနိုင်တယ်။ ဒီအချက်နဲ.တင် အန်တီစုကို လေးစားတယ်။ အတော် စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်တဲ. ကြောက်ရွံ့မှုကင်းတဲ. မိသားစုထက် တိုင်းပြည်ကို ချစ်တဲ. ဘယ်အချိန်ကြည့်ကြည့် ရိုးရာဝတ်စုံလေးနဲ. ကျက်သရေရှိရှိ တည်ငြိမ်အေးချမ်:နေတဲ. မြန်မာပြည်၏ မိခင်။ ကဲ ဘလော.ကြွလာ မိတ်ဆွေတွေကိုလည်: မေးမယ်။ အန်တီစုလို နေရဲလား ။
လောကရဲ. အလှတရား _ Beauty of Nature
ဆောင်းမှာ နှင်းတွေ အောက်မှာ ငှုပ်လျှိုး ပုန်းကွယ်နေတဲ. ပန်:ကလေးတွေ နွေဦးမှာ အစွမ်:ကုန် ဖူးပွင့်နေပါပြီ။ ဆောင်းရာသီမှာ အရွက်မရှိ မည်:ခြောက်နေတဲ. သစ်ပင်တွေ စိမ်:လန်:ဝေဆာပြီ: ဩကာသလောကတခုလုံး လှပနေပါပြီ။ လောကရဲ. အလှတရားကို အတူတူ ခံစားရအောင် ဘလော့ကနေ တင်လိုက်ပါတယ်။
ဆောင်းတုန်းက ဆီးသီးစေ့တွေနဲ. တူပြီ: ဘယ်လိုအပင်ပါလိမ့် ဆိုပြီ: စောင့်ကြည့်နေတာ။ အခုတော. အဲဒီ အသီးကနေ ဖူးပွင့်နေတာ ရဲရဲစိုပြီ: လှနေလိုက်တာ။
သူများအိမ်ရှေ့က စိုက်ထားတဲ. ပန်:တွေကိုလည်: အလွတ်မပေး။
လမ်:ဘေးမှာ သူ့ဘာသာ ပေါက်နေတဲ. ပန်:တွေပါ မကျန် အလွတ်မပေး။
ဒီပန်:ကတော. နေရာတိုင်းမှာ တွေ့တယ်။ တခါတလေ အဝါရောင် ပန်:ခင်းလားလို့ ထင်ရမယ်။ မြေကြီးနဲ. ကပ်ပြီ: ပေါက်နေတာ။
FairField,Iowa ရဲ. အထင်ကရ နေရာတွေ။
ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာ ပါတဲ. သရဲခြောက်တဲ. အိမ်လိုလို။ :)
ရန်ကုန်ပြန်တုန်းက သူငယ်ချင်းကို ဖြတ်လမ်: လမ်:သွယ်လေးတွေကို ဖြတ်ပြီ: ကားဂိတ်ကို လိုက်ပို့ပေးချိန်မှာ သူငယ်ချင်းမိဖြိုးက အိတ်ထဲက လက်နှိပ်ဓာတ်မီးလေး ထုတ်တယ်။ တကယ်လည်: အသုံးဝင်တယ်။ မီးပျက်လို့ အင်ဗာတာ၊ မီးစက်ရှိတဲ. အိမ်တွေက မီးဟိုတကွက် ဒီတကွက် မီးလင်းချိန်မှာ လမ်းမီးကလည်: ဟိုတကွက် ဒီတကွက်ပဲ လင်းတာပေါ့ ။ ဓာတ်မီးသာ မပါရင် မှောင်မှောင်မဲမဲထဲ မမြင်မစမ်းဘဲ ချိုင့်ခွက်ထဲ မှောက်ရက်လဲနေမှာ သေချာတယ်။ မြန်မာပြည်မှာလည်: ဒီလို နေရောင်ခြည်စွမ်:အင်သုံးပြီ: ဓာတ်မီးတိုင်တွေကို အလင်းပေးနိုင်ရင် ကောင်းမယ်နော်။
ဘဝမှာ သစ္စာရှိမိတ်ဆွေတွေ ရှိပေမယ်. အခန့်မသင့်ရင် မိတ်ဆွေကနေ ရန်သူဖြစ်သွားနိုင်ပေမယ်. အမြဲတမ်: မပြောင်းလဲဘဲ သစ္စာရှိနေပြီ: ကိုယ်.ကို ချစ်ခင်နေမှာက ခွေးလေးတွေပါ။ ကြောင်တွေကတော. အိမ်မသာရင် ပစ်ပြေ:ကြပေမယ်. ခွေးတွေကတော. ဘယ်တော.မှ ပစ်မပြေးဘူး။ ဘဝတကွေ့မှာ ကြုံဆုံခဲ့ရတဲ. ခွေးလေးတွေအကြောင်း ပြောပြချင်ပါတယ်။
ငယ်ငယ်တုန်းက အိမ်မှာ အံ.ကျော်ဆိုတဲ. အမဲလိုက်ခွေး ရှိတယ်။ အံ.ကျော်ဆိုတာ အဲဒီတုန်းက နာမည်ကြီး လူကြမ်: မင်းသား။ အိမ်မှာတော. ကြုံတိုင်း အံ.ကျော်အကြောင်း ပြောနေတော. အံ.ကျော်ရုပ်ကို မမှတ်မိလိုက်ပေမဲ. အံ.ကျော်အကြောင်းကတော. နားရည်ဝနေတယ်။ တိုနဲ. အတူတူ တနှစ်ထဲ မွေးတာတဲ။ ဟိုင်းကြီးကို ပြောင်းတော. လှေနောက်ကို ရေကူးပြီ: လိုက်လာတာ တော်တော်ဝေးတဲ. အထိ။ ဖေက လှော်တက်နဲ. တားပေမဲ. အတင်းရေကူးပြီ: လိုက်လာတာ မေက သနားပြီ: လိုက်ဖို. ပြောလိုက်လို့ ဟိုင်းကြီးထိ ပါလာပြန်တယ်။ ဟိုင်းကြီး ကုန်းပေါ်အိမ်မှာ ဖိုးဖိုး အိပ်နေတုန်း မြွေက ကိုက်ဖို. ပြင်နေတာ အံ.ကျော် ဟောင်လို့ ဖိုးဖိုးမှာ အသက်ဘေးက လွတ်ရတယ်။
ဘေးအိမ်က ကြီးကြီး ဒေါ်အေးတင်တို. ခြံထဲမှာ ခွေးလေး၎ကောင် ပေါက်တာ ခွေးလေးတွေက ရိုးရိုး ဗမာခွေးမဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံခြားမျိုးလေးတွေမို့ အရမ်:ချစ်စရာကောင်းတယ်။ လိုချင်တဲ. သူတွေက လာလာချောင်းနေလို့ နို.မပြတ်ခင် သွားယူပြီ: မွေးရတယ်။ ညဖက် မေတို.အိပ်ယာဘေးမှာ သိပ်ရတယ်။ နိုးဘူး ၁လလောက် တိုက်ရတယ်။
သူတို.လေးတွေကို ချီသွားရင် အရုပ်လေးတွေလို့ ထင်ကြတယ်။ ဟောင်မှပဲ သိတော.တယ် တကယ်ခွေးမှန်း။ အိမ်က ခွေးကို ရန်ကျော် ဦးမောင်အေးဖြူအိမ်က ခွေးကို ရန်ဘိုလို့ နာမည်ပေးလိုက်ကြတယ်။ တို.အိမ်က ခွေးတွေကလည်: မင်းသားနာမည်တွေကြီးပဲ။ ရန်ဘိုကတော. ခွေးပေါ။ လူတကာဆီက မုန့်လိုက်တောင်းတယ်။ ရန်ကျော်က ကလေးတွေဆို လိုက်လိုက်ဆွဲတယ်။ ဟိုက လာတိုင် ဒီက လာတိုင်နဲ.။ လူတကာကို တောင်းပန်နေရတယ်။ ကြိုးချည်ထားရင်လည်: ပိုကိုက်ပြန်တယ်။
တနေ့တော. ကျောင်းက ပြန်လာတဲ. မောင်မောင်က အိပ်နေတဲ. ရန်ကျော်ခေါင်းကို သွားပုတ်တာ အိပ်နေရာကနေ လန့်ပြီ: ကိုက်တာ မောင့်မောင့်လက်မှာ အစွယ်၂ချောင်းရာ နက်သွားလို့ ဆေးခန်:ဆီ ပြေးရပြန်တယ်။ မေက ဆူတော. သူ့အပြစ်သိသလို ငြိမ်ပြီ: ထမင်းလည်: မစားတော.ဘူ:။ သနားဖို.လည်: ကောင်းရဲ.။ ဟိုဖက်ကမ်:က ဦးငတူးအိမ်ကို ပေးလိုက်တယ်။
ဟိုဖက်ကမ်:မှာလည်: ကိုက်လို့ အိမ်ကို ပြန်လာတဲ.နေက အိမ်တောင်မရောက်သေးခင် လှေပေါ်ကနေ ဝမ်:သာအားရ နှုတ်ဆက်နေတာ။ မကြာပါဘူး လူတကာ လိုက်ကိုက်နေလို့ ကရင်တွေကို ပေးလိုက်ဖို. ဖေမှာ ခက်ခက်ခဲခဲ ဆုံ:ဖြတ်လိုက်ရတယ်။ မေနဲ. မောင်မောင်က ငိုလိုက်ကြတာ အဲဒီနေ့က။ တို.က ပုသိမ်မှာ ကျောင်းတက်နေလို့။ တို.ပါ ရှိရင် သားအမိတွေ တပျော်တပါး ငိုကြဦးမှာ။ အဲဒီတည်းက ဆုံ:ဖြတ်လိုက်ကြတာ ဘယ်တော.မှ ခွေးမမွေးတော.ဘူးလို့။ သံယောဇဉ် ဖြစ်လွန်:လို့။ အဲဒီတည်းက မေက ထင်သွားတယ် သူ မွေးရင် ကိုက်တတ်တယ် ဆိုပြီး။ တို.မွေးရင်တော. ခွေးပျင်းဖြစ်မှာ သေချာတယ်။ မေက လက်ဆိပ်ရှိတယ်။ သေနေတယ်. အပင်တောင် မေဂရုစိုက်လိုက်ရင် ပြန်ရှင်တယ်။
ကြီးကြီး ကြံမခိုင်တို. အိမ်က ခွေးတွေက လိမ်မာကြတယ်။ ကရင်တွေ သတ်စားမလို့ လုပ်နေတဲ အချိန် သနားလို့ ဝယ်လာတဲ. ခွေးမလေးက ဂျက်မ။ တို.ငယ်ငယ်တုန်းက ဟောင်ကောင်ဂျက်မရုပ်ရှင်တွေ နာမည်ကြီးတယ်။ ဂျက်မရေ အို.အို့လို့ ခေါ်လိုက်ရင် လှမ်:ကြည်.ပြီ: မုန့်တကယ်ကျွေးဖို. ခေါ်တာလာ: ညာခေါ်တာလား လှမ်:checkတယ်။ တကယ်ကျွေးမယ် ထင်မှ လာတာ။
တခါက အိမ်ရှေ့က တံတားပေါ်မှာ မရမ်:ကွင်:ဖက်က သစ်တွေလာပို.ထားတယ်။ မဲလုံးဆိုတဲ. ခွေးဟောင်မှပဲ သိတော.တယ်။ သူခိုးလာကပ်မှန်း။ နောက်နေ့မနက်ကျတော. မဲလုံးကို မုန့်တွေ ဝယ်ကျွေး ကျောကုန်းကို သပ်ပေး good jobပေါ့။ မမစိန်သန်:ရီတို.အိမ်က ခွေးက ဥစ္စာခြောက်တဲ. ခွေး။ သူ့အိမ်က ပစ္စည်းတခုခုယူပြီ: အိမ်ပေါ်က ဆင်းသွားရင်ပဲ လိုက်လိုက်ဟောင်လို့လေ။ တခါတလေ ပျင်းရင် ဒင်းကို သွားသွားစကြတယ်။ အပျိုကြီးရဲ. ခွေး ဘိုဘိုက ခွေးချောလေး။ ဂျက်မက ဘိုဘိုကို ကြိုက်တယ်။
ကိုသိန်:ဝင်းရဲ.ခွေး ခေါင်းကြီးက နိုင်ငံခြားမျိုး။ မတ်တပ်ရပ်လိုက်ရင် ၅ပေ ၈လက်မလောက် မြင့်တယ်။ အနံ့ခံအရမ်:ကောင်းတယ်။ ငါးခြောက်အစလေးတွေ ပေးလိုက်ရင် မောင်အေးခွေး တယ်ရီယာပုလေး ဒေါ်လာက ဗိုက်ဝနေရင် မစားဘဲ ဖွက်ထားလိုက်။ အနံ့ခံကောင်းတဲ. ခေါင်းကြီးက ဒေါ်လာဖွတ်ထားတာတွေ ရှာဖွေစားသောက်လိုက်။ ဒေါ်လာနဲ. ခေါင်းကြီးက တခြားဗမာခွေးတွေနဲ. မပေါင်းဘူး။ ရှည်ရှည်လန်ဘား ခေါင်းကြီးနဲ. ပုတက်တက် ဒေါ်လာတို. ဆော့နေကြတာ အတော်ကို ရီစရာ ကောင်းတယ်။ ခေါင်းကြီးတို.မျိုးက ဘိန်:တွေ မိုင်းတွေ ရှာဖွေတဲ.နေရာမှာ သုံးတဲ. ခွေးမျိုး။ ၂နှစ်လောက်ကြာမှ ပြန်တွေ့ပေမယ်. ခွေးတွေက မှတ်မိတယ်။ ကြောင်တွေက ၁လဆိုရင်တောင် မမှတ်မိဘူး။
ရန်ကုန်ဘေးအိမ် အန်တီဆွေတို.အိမ်မှာ ဖိုးလုံးဆိုတဲ. ခွေးတကောင်ရှိတယ်။ အဖြူအနက်နဲ. အတော်လှတယ်။ သားသမီးမရှိတဲ. သူတို.အတွက်ကတော. သားသမီးလိုပါပဲ။ ဖိုးလုံးကို အကြောင်းပြုပြီ: လမ်:ဘေးခွေးမတွေ လမ်:ထဲရောက်လာပြန်ရော။ လမ်:ဘေးခွေးမကြီးက ခွေး၉ကောင်မွေးတယ်။ သူ.ကို ကျွေးရင် စားပြီ: ကလေးတွေကို အန်ကျွေးတယ်။ သူကနေ မွေးတဲ.အထဲမှာ ပျာယာနဲ. ထိပ်ချွန်းဆိုတဲ. ခွေး၂ကောင်ကို မှတ်မှတ်ရရ ရှိတယ်။ ပျာယာကတော. ဗိုက်ဆာရင် ပျာယာခတ်ပြီ: တောင်းပေမယ်. ဗိုက်ပြည်.ရင်တော. လှည်.တောင်မကြည်.ဘူး။ လိုရင် တမျိုး မလိုရင် တမျိုးဆိုတာ သူမှ အစစ်။
ထိပ်ချွန်:မလေးကတော. စိတ်ရင်းကောင်းတယ်။ သူ့ကို တလမ်:လုံးက ဝိုင်းချစ်ကြတယ်။ လက်ကလေး ရှေ့ချပြီ: ရှိခိုးသလို အစားတောင်းတယ်။ လက်ပေးဆိုရင်လည်: ပေးတယ်။ အီကြာကွေးတွေ ပစ်ကျွေးရင် မိအောင် ဖမ်:တယ်။ သူ.ကို သတိမထားမိရင်လည်: လက်နဲ. လာကုတ်တယ်။ ကိုယ်က ဟိုဖက်ကားလမ်:မှာပဲ ရှိသေးတယ် သူက ဒီဖက်ကားလမ်:ကနေ အမြီးလှုပ်ပြီ: ကြိုနေတာ။ အပြင်သွားရင်လည်: နောက်ကလိုက်လာတတ်တယ်။ သူတို.ပိုက်နက် လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ရောက်ရင် ရပ်ပြီ: ကျန်ခဲ.တော.တယ်။ မေက သူတို.တွေအတွက် အိမ်ရှေ့မှာ သောက်ရေအင်တုံလေးထားပေးတယ်။ မနက်တိုင်း ရေဖြည်.ပေ:ရတယ်။ ဂလုံသံ ကြားရရင် ရေကုန်လို့ အင်တုံကို မှောက်နေကြပြီ။ နွေဆို ပူလို့ ရေသောက်ကြတာ တနေ့ကို ၂ခါလောက် ဖြည်.ရတယ်။ တနေ့တော. ထိပ်ချွန်:မလေး မတွေ့လို့ ရှာကြတာ နောက်တော. သိလိုက်ရတယ်။ စည်ပင်က အမဲတုံးနဲ. တိုးသွားတယ်တဲ။
ခွေးမွေးဖို. ကြံနေတာ ရန်ကုန်တိုက်ခန်:နဲ.က မလွယ်။ တနေ့ ဒါမဟုတ် ၂ရက်ခြားတခါလောက် ခွေးကျောင်းရတယ်တဲ.။ အေးလေ နို.မို့ ခွေးလည်: အညောင်းမိနေမှာပေါ့။ တပတ်ကို ၂ကြိမ် ရှန်ပူနဲ. လျှော်ပေးရတယ်တဲ။ အောင်မလေး ကိုယ်တောင် ပျင်းလို့ လမ်:လျှောက်မထွက်တာ ခွေးကျောင်းရမယ်တဲ.။ ဒီလောက် ကရိကထ မခံနိုင်တာနဲ. ရန်ကုန်မှာ ခွေးမဖြစ်ဘဲ ဂါးဖီးပဲ မွေးဖြစ်တော.တယ်။ ခွေးရုပ်ရှင်လေးတွေ ကြည်.ရတိုင်း ခွေးမွေးချင်ဆဲ။ အခုတော. ခွေးမွေးဖို. မပြောနဲ. လူတောင် အနိုင်နိုင် ရုန်းကန်နေရတာ။ ခွေးလေးတွေ ဆွဲပြီ: လမ်:လျှောက်နေသူတွေကို အားကျတဲ. အကြည်.နဲ. ကြည်.နေဆဲ။ တချိန်ချိန် ခွေးမွေးမယ်လို့ ကြုံ:ဝါ:ဆဲ။
အိမ်မှာ ကြွတ်သောင်းကျန်:တာနဲ. မကြီး စင်ကာပူသွားလို့ တယောက်လည်: ရောင်ချာချာ ဖြစ်နေလို့ ကြောင်မွေးမယ်လို့ စိတ်ကူးမိပါတယ်။ ဖေမေတို.ကို ပြောတော. သူ့သမီး ပျင်းနေတာနဲ. အဖော်ရအောင် မွေးတယ်.။ တကယ် မွေးမယ်ဆိုရော ကြောင်ကို ဘယ်က တောင်းရမှန်: မသိ။ သူငယ်ချင်းဖြိုးအိမ်မှာ ကြောင်တွေရှိပေမယ်. သူ့အမေရဲ. အသည်းကျော်တွေမို့ မတောင်းရက်ပြန်ဘူး။ ဟိုင်းကြီးက အိမ်မှာလည်: ကြောင်ပေါက်စလေး မရှိ။ အိမ်မှာ ပိုက်ဖာတဲ. ကောင်မလေးက သူ့အိမ်မှာ ကြောင်နှစ်ကောင် ရှိတယ်။ ၂လသားလေး။ အမမို့လို့ ပေးတာ သူများဆို မပေးဘူးတဲ.။ ပေးတာတောင် အင်တင်တင် လုပ်နေသေးတယ်။ သူများတွေကို မေးကြည်.တော. အဲဒီကြောင်လေးတွေ သန်.တယ်ဆိုမှ ယူမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ရန်ကုန်မပြန်ခင် ညနေမှာ မောင်မောင်နဲ. ကြောင်သွားယူကြတယ်။ မောင်မောင်ပဲ ရွေးတယ်။ အိမ်ရောက်တော. အုပ်ဆောင်းအောက်မှာ လှောင်ထားတယ်။ သူ့ခမျာလည်: ကြောက်နေရှာပါပဲ။ မိကွဲဖကွဲ မောင်နှမကွဲပြီ: သူစိမ်:တွေဆီ ရောက်လာတာ။ အိမ်က ပူစီမနဲ. ပူစီလေးကလည်: အုပ်ဆောင်းနားကို ဝိုင်းပြီ စပ်စုနေတာ အထဲက ကောင်လေးကလည်: တဗြဲဗြဲနဲ. ရန်ရှာနေတာများ။
ထမင်းဘူးတွေ ထည်.တဲ. ခြင်းတောင်းကို အဖုံးအလုံပိတ်နဲ. သူ့ကို ထည်.ထားတာ။ ညောင်းတယ်နဲ. တူပါတယ် အသံလေးပေးရှာတယ်။ ဒါနဲ. အပြင်ထုတ်ပြီ: ပေါင်ပေါ်ထင်ထားတာ ထွတ်မပြေးဘူး။ ရှပ်ပြေး အထူးခန်:မှာ သခင်နဲ. ကြောင်နဲ. အပြိုင်အိပ်လိုက်ကြတာ။ ရန်ကုန် ပုသိမ်ကားပေါ်မှာလည်: ငြိမ်ပြီ: လိုက်လာတာ ကြောင်သယ်လာတယ်လို့တောင် မထင်ရဘူး။ ကြည့်ဖူးတဲ. ကာတွန်:ကားထဲက ကြောင်ကို သဘောကျလို့ ဂါးဖီးလို့ နာမည်ပေးလိုက်တယ်။ ဂါးဖီးက ဟိုင်းကြီးသားစစ်စစ်လေးပါ။
နာမည်စီးတယ်နဲ. တူပါတယ် ။ ဝဖီးတာ ပျင်းတာ ကြွတ်မခုတ်တာ ဂါးဖီးကာတွန်:ထဲက ဂါးဖီးအတိုင်းပဲ။ ဂါးဖီတသက် ကြွတ်ပေါက်စလေး နှစ်ကောင်ပဲ ဖမ်:ဖူးတယ်။ သူဖမ်:မိတဲ. ကြွတ်ကို လာလာပြရတာ အမော။ တခါက မြေကြွတ်ကြီး လာတာ တို.က တုတ်နဲ. လိုက် ဂါးဖီးကလည်: လိုက်ပေါ့။ ပြေးစရာ မရှိလို့ မြေကြွတ်က အမွှေးထောင်ပြီ: ကိုယ်.ဆီကို ပြေးလာရော တုတ်ကို ပစ်ချပြီ: သခင်နဲ. ကြောင် အပေါ်ထပ်ကို ပြေးလိုက်ကြတာ တန်:နေတာပဲ။ ဖေက ဂါးဖီးကို ကြည်.မရဘူး။ သမီးကြောင် ငပျင်း ကြွတ်မခုတ်ဘူးတဲ.။ ကြွတ်မခုတ်စရာ မလိုဘူး အဖော်ရရင် တော်ပြီလို့။
ဖေ့ကြောင် ပူစီမက ကြွတ်တကယ် ခုတ်ပါတယ်။ လူနားလည်: သိပ်မကပ်ဘူး။ လင်းနို.တောင် ဖမ်:တယ်။ အမြီးလေးက ပါတယ် ဆိုရုံလေး။ မြီးတိုမျိုး။ ပူစီမက မွေးတဲ. ပူစီလေ:တွေဆို လိုချင်ကြတယ်။ ဖေညဖက် သင်းဘောတွေ ဆင်းကြည်.ရင် ပူစီမလည်: လိုက်တယ်။ ပူစီရေ တံခါးပိတ်တော.မယ်လို့ ပြောလိုက်ရင် အူရားဖားရား ပြေးလာပါတယ်။ မနက်တိုင်း အိမ်က ထမင်းချက် လှဌေးနောက်ကို လိုက်ကြတယ်။ လှဌေးက ထမင်းကို ပဲဆီဆမ်:ပြီ: ကျွေးတယ်။ ပဲဆီကုန်နေလို့ စားအုန်းဆီနဲ. ကျွေးလို့ကတော. တချက်နမ်:ကြည်.ပြီ: မစားဘူး။ ထမင်းစားရင်လည်: ပူစီမက ဘယ်တော.မှ အရင် မစားဘူး။ ပူစီလေး အရင်းစားပြီ:မှ စားတယ်။ ဖေတို.တွေ ထမင်းစားကြရင် ထမင်းဝိုင်းဘေးမှာ ညောင်လို့ တချက်မအော်ဘဲ ငုတ်တုတ်လေး မျှော်နေကြတာ သနားဖို.တောင် ကောင်းတယ်။ အသားဟင်းမစားတော. သန်သိပ်မထဘူး။ အဲ သားစိမ်:တော. စားတယ်။
တို. ဂါးဖီးလည်: တချက်မှ ညောင်လို့ မတောင်းဘူး။ ဘယ်တောင်းမလဲ အမြဲဗိုက်ဝနေလို့လေ။ ကြွတ်ဖမ်:အောင် ညစာကို ဝဝမကျွေးနဲ.တဲ.။ အဲဒီတော.မှ ကြွတ်ခုတ်မှာတဲ.။ ဂါးဖီးကတော. မောင်မောင်စားရင် ကျွေးလိုက်၊ တို.စားရင်း ကျွေးလိုက်နဲ. အမြဲဗိုက်ပြည်.နေတယ်။ ကြွတ်မခုတ်တာလည်: မပြောနဲ. သခင်တွေက အမြဲကျွေးနေတာကိုး။ အကြင်.နာကြောင် ကိုညိုလာစားရင်လည်: ဘာမှမဖြစ်။ ကြောင်ထီးတွေ ဆုံရင် ကိုက်ကြတာ ကိုညိုနဲ. ဂါးဖီးကတော. ချစ်လိုက်ကြတာ။ ဆော.လိုက်ကြတာများ ဗြောင်းဗြောင်းကို ဆန်။ ဂါးဖီးကို ကလေးတွေလည်: ချစ်တယ်။ အကြင်နာတို.လာရင် လဲပြီ: ပက်လက်လှန်ပြီ: ဆော.ဖို. ရယ်ဒီ ဖြစ်နေပြီ။
ည၉နာရီလောက်ဆို လက်ကလေး ဆန်.ပေးတာနဲ. ဘိုင်းကနဲ ပစ်လဲပြီ: အိပ်တော.တာ။ စာကျက်နေရင် ဖွင့်ထားတဲ. စာအုပ်ပေါ်မှာ တက်အိပ်တယ်။ ညဖက် ၂နာရီလောက် အောက်ထပ်ဆင်းရင် အိပ်နေရာက အူရားဖားရားထပြီ: လိုက်ဆင်းတယ်။ အပြင်က ပြန်လာရင် အိမ်ကို မဝင်သေးဘဲ ဘေးအိမ်က မဇင်မာဆီ ဝင်ပြီ: စကားပြောနေရင် အိမ်ထဲကနေ တဗြဲဗြဲနဲ. အော်ပြီ: နှုတ်ဆက်ရတာ။ ဗိုက်ဆာရင် တို.နားလာတောင်းပြီ:မောင့်မောင့်ကို မြင်ရင်တော. ဘိုင်းကနဲ လှဲချပြီ: ပက်လက်လှန်ပြီ: ဆော.ဖို တောင်းတော.တာပဲ။
ဘေးအိမ်က ဘေ့ဘေ့မှာ ကြောင်အမေကြီးရယ် ကြောင်မလေး၃ကောင်ရှိတယ်။ ဘေ့ဘေ့ရေ ညည်းသမီးတွေ ကြည်.ထိန်:ထား အမေက လာပိုးလိုက် သမီးတွေက လာပိုးလိုက် ငါ့ဂါးဖီးက ငယ်သေးတယ်။ သားရေးသမီးရေးတွေ ။ တခါက လမ်:ဘေးကြောင် ရုပ်ဆိုးဆိုးမနဲ. ချိတ်တိတ်တိတ်ဖြစ်လို့ သဘောမတူဘူးတွေ ဘာတွေဖြစ်။
ဘေးအိမ်က ဆည်းဆာတို.အိမ်က ကြောင်ကြီးက ဂါးဖီးကို လာလာဆော်တယ်။ လာဆော်ရင် အသံဗြဲနဲ. အော်ပြီ: အကူအညီတောင်းလို့ သခင်ကပါ ဝင်ဆော်ပေးရတယ်။ သူ့ထက် သေးတဲ. အကောင်တွေကို သူက အနိုင်ကျင့်ချင်သေးတာ။ လမ်:ဘေးခွေးလေး ထိပ်ချွန်းမလေးက တခါတလေ လူလစ်ရင် အိမ်ထဲ ဝင်ပြီ: အိပ်တတ်တယ်။ တခါ ဂိန်ကနဲ အသံကြားလို့ ကြည့်လိုက်တာ ဂါးဖီးရယ် အိပ်နေတဲ. ထိပ်ချွန်းအမြီးကို လက်နဲ. သွားဆွဲတယ်လေ။ လူတွေ ရှိတော. ထိပ်ချွန်းမလေးက အော်ပဲအော်ပြီ: ဘာမှ ပြန်မလုပ်ဘူး။ အဲ လူလစ်ရင်တော. သူက ဦးဆောင်ပြီ: ဂါးဖီးကို လိုက်တာ။
ဂါးဖီးကို ကြီးလှပြီ ထင်တာ စင်ကာပူက ကြောင်တွေကမှ ဟဲဗီးကြီ:တွေ။ တိုက်အောက်မှာ ရှိတဲ. ကြောင်တွေကို ပုဇွန်ခြောက် ကျွေးဘူးတယ်။ လုံးဝမစား။ မြန်မာပြည်က ကြောင်တွေနဲ.များ ကွာပါ့။ ပုဇွန်ခြောက်ဘူးဖွင့်တာနဲ. အနားရောက်နေပြီ။
Programmer Friendly !
NUS(National University Of Singapore),ISS(Institute of System Science) မှာ GDipSA တက်တုန်းက AD(Application Development) Project တလလုပ်ရပါတယ်။ IA (Internship Attachment)မဆင်းခင် ရုံးချိန်အတိုင်း ကျောင်းတက် formal dress ဝတ်ရတာပါ။ အစကတော. user screen design ကို users တွေအတွက် စဉ်းစားပြီ: user friendly ဖြစ်ဖို. ဆွဲကြတယ်။ တကယ် coding ရေးမယ်ကြံရော coding ရေးရတာ ခက်ရင် programmer friendly မဖြစ်လို့ user screen design ကို ပြောင်းကြပြန်တယ်။ AD Project လည်: ပြီ:ရောပြောစမှတ်ကို တွင်ရော user friendly ထက် programmer friendly က အဓိကလို့ ။
IAတုန်းက Moblie Application တခု လုပ်ရပါတယ်။ အေးပိုက server side တို.က client side ။ ဖုန်းထဲက application က ဘတ်စ်ကားနံပတ် နဲ. ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင် ရိုက်ထည်.ပြီ: SMS ပို့လိုက်ရင် ဘယ်နှမိနစ်ကြာရင် ဘတ်စ်ကားလာမယ်ဆိုပြီ: ကိုယ်.ဖုန်းဆီ SMS ပြန်ပို့ပေးတာပါ ။ အမှန်က SBS transit website မှာ ရှိပြီ:သား ဖုန်းapplicationအဖြစ် ပြောင်းလိုက်တာပါ။ Project ပြီးလို့ testing လုပ်တယ်. အချိန်ကျတော. Nokia ဖုန်းနဲ. အဆင်ပြေပေမယ်. Sony Ericssonကျရော ပြသာနာ တက်ပါလေရော။ SMS ပို့တိုင်း Please wait. Connecting!ဆိုတယ်. Messageပဲ ပြနေလို့လေ။ နှစ်ယောက်သား အဖြေရှာမရတယ်. အဆုံး ကို Senior Sam ကို သွားမေးတော.မှ သိရတော.တယ်။ Sony Ericssonက data ပို့တယ်. စနစ်က တမျိုးမို့လို့ SBS website က dataကို မဖတ်နိုင်တာတယ်.။ IA ပြီ:ခါနီး ET ရဲ. project ကို ကူရဦးမှာမို. ထားလိုက်တယ် ။ supervisor ကို စမ်:ပြရင်လည်: nokia ဖုန်းနဲ.ပဲ စမ်:ပြတယ်။ IA Project လည်: ပြီ:ရော ပြောစမှတ်ကို တွင်ရော တို. phone application က Nokia only လို့။
SBS website က data accessကို လုပ်နိုင်စွမ်:ကို သိရအောင် စမ်: ဆိုလို့ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် အားရပါးရ testing ကို လုပ်ကြတယ်။ for loop အကြိမ်တထောင်လောက် ပတ်ပြီ: SBS website ကို access လုပ်လိုက်တာ နောက်နေ့ ကို ဖွင့်လိုက်တာနဲ. SBS website ကို accessလုပ်လို့ မရတော.ပါဘူး။ ဒီ IP address က SBS webstie down အောင် လုပ်နေတာလို့ ထင်ပြီ: ဘမ်:လိုက်ပြီလေ။ supervisor ကို ပြောတော. နင်တို.ကို stimulate လုပ်ခိုင်းတာ တကယ်စမ်:ခိုင်းတာ မဟုတ်ဘူးတဲ.။ သိဘူးလေ stimulate လုပ်ရမယ်မှန်:။ တကယ်ကြီ: စမ်:တာပေါ့။
IA ပြီ:တော. supervisorက တို.တွေကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောပါတယ်။ ရှေ့နှစ်က စီနီယာတွေက သူ့ဆာဗာကို ဖျက်သွားတယ် တို.တွေက မဖျက်လို့တဲ.။ ဆာဗာကို ဘယ်လို ဖျက်ရမယ်မှန်: မသိလို့ သိရင် ဖျက်တယ်လို့ ပြောလိုက်တယ် စိတ်ထဲက ။
(သူငယ်ချင်းဝေ ပြောပြတဲ. ဂျပန်ခရီးစဉ် အတွေ.အကြုံတွေကို ပြန်ရှယ်လိုက်ပါတယ်။)
သိတဲ. အတိုင်း စလုံးဆိုတာ ကွန်ပလိမ်: ခပ်များများရယ်။ ဒီတခေါက် customersစလုံးတွေက အတော်.ကို ကွန်ပလိမ်:နည်:ပါတယ်။ ဒါပေမယ်.လည်: ရေခဲမှတ်အောက် ရောက်နေတဲ. ရာသီဥတုမှာ လည်စရာတွေ လည်ပြီ: ကားပေါ်တက်လာရင် ဂျပန်တွေက နွေးအောင် အပူပေးစက် ဖွင့်ပေးထားပေမယ်. စလုံးတွေက လေအေးပေးစက် ဖွင့်ပေးဖို. တောင်းဆိုပါသတဲ.။ ဂျပန်တွေက အတော်ကြီ: အံ.ဩကုန်တယ်။ တယ် ထူးဆန်:တဲ. စလုံးတွေပေါ့။ ဟိုတယ် အခန်:ထဲ ရောက်ရင်လည်: လေအေးပေးစက် ဖွင့်ဖို. တောင်းဆိုပါသတဲ.။ လေအေးပေးစက် ဖွင့်ခိုင်းတော. ဂျပန်တွေ တော်တော် အလုပ်ရှုပ်သွားတယ် ။ စကားပြန်ကတဆင့် ရှင်းပြခိုင်းရတယ်။ ဂျပန်မှာက ဆောင်းရာသီဆိုရင် ဗဟိုလေအေးပေးစက်ကို ပိတ်ထားတာ နွေရောက်မှ ပြန်ဖွင့်တော.တာ ။ ကဲ လေအေးပေးစက် မရရင်လည်: ပြတင်းပေါက် ဖွင့်မယ် ဆိုတော. ဂျပန်တွေက စိတ်ပူတာပေါ့။ ညဖက် ခဲသွားမှဖွင့် ဒုတ်ခ။ စိတ်မပူနဲ. တာဝန်ယူတယ် ဆိုမှ ဖွင့်ပေးတော.တယ် ။ ပြတင်းပေါက်ကလည်: နှင်းတွေနဲ. ပိတ်ပြီ: အတော်.ကို ခက်ရခဲဆစ် ဖွင့်ရတယ်။ စကားပြန် စလုံးကြီးက သူတို. စလုံးအကြောင်း ကောင်းကောင်းသိလို့ မှတ်ချက်ချတယ်။ "စလုံးတွေက တကိုယ်လုံး အဝတ်ထူထူ ဝတ်ပြီ: နွေးနေပေမဲ. မျက်နာလေးတော. အေးနေမှ"တဲ.။
ဝန်ဆောင်မူကောင်းပါတယ် ဆိုတယ်. စလုံးတွေ လက်မြှောက်ရအောင် ဂျပန်ဝန်ဆောင်မှုက အရမ်:ကောင်းပါတယ်။ ခါ:ညွတ်ပြီ: အရိုအသေ ပေးတာများ ကားကို မမြင်ရတော. အထိ။ တကယ်.ကို ရင်ထဲက စိတ်ပါလက်ပါ ဝန်ဆောင်မူ ပေးကြတာပါ။ ခက်တာက English စကားမပြောတတ်ကြတာပါ။ တိုကျိုမြို.မှာတော. အနည်းအကျဉ်: ပြောနိုင်ကြပေမယ်. တခြားနေရာမှာတော. လုံးဝမပြောကြတာပါ။ ဒီနေရာမှာတော. စလုံးနဲ. မြန်မာက သာပြန်ရော။
ဘေးအိမ်ကို ပြောင်းလာတဲ.အချိန် အကြင်နာက ၆လ သမီးပဲ ရှိသေးတယ်။ တစ်ဦးတည်: သမီးပီပီ လာသမျှ ကလေးတွေကို အလျှော.ပေးပြီ: သူက ဆော.တယ်။ ဒီလိုနဲ. မျက်စိရှေ့မှာတင် ကြီးပြင်းလာလိုက်တာ သူငယ်တန်:တက်ဖို. အရွယ်ရောက်လာရော။ ကျောင်းနာမည်လှလှလေး ပေးဖို. သူ့မားမားမှာ ရွေးရတာ အမော။
တစ်နေ့တော. "အကြင်နာရေ သမီး ကျောင်းနာမည် ဘာလဲ" မေးတော. "တသွင်သွင်စီး မမ" ဆိုလို့ တို.ညီအမတွေ ရယ်လိုက်ရတာ။ သူ့ဒယ်ဒီပေးတဲ. နာမည်လှလှလေးက သွင်နဒီဆန်:တဲ.။ ဟုတ်သားပဲနော် နဒီမြစ်က တသွင်သွင်စီးနေတာပဲ။
ရန်ကုန်မှာတော. လမ်:ထိပ်တိုင်းမှာ အမှိုက်ပုံ ရှိပါတယ်။ တရပ်ကွက်လုံးက အမှိုက်တွေ လမ်:ထိပ်မှာ ပုံထားပြီ: ည ၁၁နာရီ လောက်မှ စည်ပင်သာယာ အမှိုက်ကားက လာသိမ်:တယ်။ လာသိမ်:ချိန်ဆို အနံ့အသက်က ဆိုးလှပါတယ်။ မိုးရာသီဆို ပိုဆိုး။ အမှိုက်တွေကို ကျွပ်ကျွပ်အိပ်နဲ. မထည်.ပဲ ဒီအတိုင်း ပစ်ကြတာ ဆိုတော.လေ။ အမှိုက်ကောက်ကြတဲ. သူတွေကလည်: အမှိုက်ပုံ ဖွကြတော. လေအဝှေ့မှာ အမှိုက်နံ့က တသင်းသင်းပေါ့။ အမှိုက်ကောက်ရင်း လုကြ၊ ရန်ဖြစ်ကြတာ ရှိသေးတယ်။ ပိုက်ဆံ ၃သိန်:လောက် စည်ပင်ကို ပေးလိုက်ရင် အမှိုက်ပုံကို ရွှေ့လို့ ရပါတယ်။ လမ်:ထဲက လူမညီ၊ ပိုက်ဆံကုန်မှာ ဆိုတော.လည်း အမှိုက်ပုံကလည်: အရင်အတိုင်း၊ ပိုက်ဆံရှိရင် ဒီနေရာက ပြောင်းမယ်၊ အမှိုက်ပုံကို ရွှေ့ပစ်မယ်လို့ ကြုံ:ဝါးဆဲ၊ အမှိုက်လာသိမ်:ရင် နှာခေါင်းပိတ်ပြီ: အဝေးကို ပြေးကြဆဲ။
စင်ကာပူမှာတော. အမှိုက်ကို ပန်:ကန်ဆေးတဲ. နေရာအောက် အပေါက်ကနေ ပစ်လိုက်ရုံပါပဲ။ နေရာတိုင်းမှာ အမှိုက်ပုံး ရှိတော. အမှိုက်ကို အလွယ်တကူ ပစ်လို့ရတော. စနစ်တကျပဲ အမှိုက်ပုံးထဲ ပစ်တယ်။ ဒါတောင် စည်းကမ်:မဲ.သူတွေ ရှိတော. အမှိုက်ပစ်တာမိရင် ဒဏ်ငွေ ၃၀၀ နဲ. အမှိုက်လိုက်ကောက်ရမှာ ဘယ်နှစ်နာရီဆိုပြီ: သက်မှတ်ထားသေးတယ်။ ဒဏ်ငွေ ၃၀၀ ဆိုတာ တော်တော်များပါတယ်။ တလ ဗိုက်ပုတ်ပြီ: စားလို့ရတယ်။ Pasir Ris Beachမှာ ကောင်လေးတယောက် အမှိုက်ကို စည်းကမ်:မဲ. ပစ်တာ ယူနီဖောင်းဝတ်မထားတဲ. အန်ကယ်တယောက်က လာပြီ: IC တောင်းပြီ: သိမ်:ထားလိုက်တယ်။ IC သွားထုတ်ချိန်မှာ ဒဏ်ငွေ ၃၀၀ ဆောင်ရပါမယ်။ ရုံးက အားဝီတယောက် သူ့ရှေ့မှာ မြင်တွေ့ခဲ.တာကို တို.များကို ဖောက်သည်ချပြီ: အမှိုက်ကို စည်းကမ်:မဲ. မပစ်ဖို. သတိပေးပါတယ်။
ရန်ကုန်ပြန်တုန်းက သူငယ်ချင်းတွေနဲ. အင်းလျားကန်စောင်းမှာထိုင် နေကြာစေ့စားပြီ: လေပန်:ကြတာ အိမ်ပြန်တော. အမှိုက်က ကျွပ်ကျွပ်အိတ် တထုပ်ရတယ်။ အမှိုက်ပုံးရှာတာ တော်တော်နဲ. မတွေ့လို့ အမှိုက်ထုပ်ကို ကိုင်ပြီ: လမ်:လျှောက်တာ တော်တော်ဝေးဝေး ရောက်တဲ.အထိ ပါပဲ။ သူငယ်ချင်းတွေက နင်အမှိုက်ထုပ် အိမ်သယ်သွားမလို့လားတဲ.။ ဘယ်ပစ်ရမှန်:မသိလို့ ဆိုတော. အမှိုက်ပစ်ဖို. မရဲဖြစ်နေတဲ. တို.လက်ထဲကနေ ဆက်ကနဲ ယူပြီ: ဘေးနားရှိတဲ. မြောင်းထဲ ပစ်လိုက်ပါတယ်။ ပြီ:တော. ပြောလိုက်သေးတယ် နိုင်ငံကြီ:သား ပီသစွာ အမှိုက်ကို တွေ့ရာ ပစ်ရတယ်။ ဒါ စင်ကာပူ မဟုတ်ဘူး။ ရန်ကုန် မြန်မာပြည်။ ရန်ကုန်ရောက်ရင် ရန်ကုန်လို ကျင့်ရတယ်တဲ.။ ကောင်းရော။
နိုင်ငံခြားမှာ recycle လုပ်ဖို.၊ recycle လုပ်တဲ. ပစ်စည်းကို သုံးဖို. နှိုးဆော်တာတွေ တွေ့ရပါတယ်။ မြန်မာပြည်ကတော. တော်တော်ခေတ်မှီပါတယ်။ တို.တွေ ငယ်ငယ်ကတည်:က ပုလင်းခွံတွေ၊ သတင်းစာအဟောင်းတွေ၊ ဒန်သတ်ထု အိုးအဟောင်းတွေ၊ ဓာတ်ဘူးအဟောင်းတွေကို စုထားပြီ: ဒန်အိုးဟောင်းတွေ ဝယ်တယ်၊ ပဲလှော်နဲ. လဲတယ် ဆိုတဲ. ကုလားကြီ: အသံကြားတာနဲ. စုဆောင်းထားတာတွေနဲ. လဲတော.တာပဲ။ အိမ်က အိုးအသစ်ကို မပြီ: ပဲလှော်နဲ. အလဲကောင်းတဲ. သူငယ်ချင်းတယောက်ခမျာ သူ့အမေက ဆော်ပလော် တီးတာခံရတယ်။ ဖေ့ရဲ. အားကစားဂျာနယ်တွေလည်: များလာရင် ဦးမရမ်:သီးဆီ သွားရောင်းရတယ်။
နယ်မြို.တွေက မညစ်ပတ်ပေမယ်. ရန်ကုန်ကတော. အတော်ညစ်ပတ်ပါတယ်။ ဘာလို့ ကောင်းမွန်တဲ. အမှိုက်သိမ်:စနစ် မရှိတာပါလိမ့်။
ရန်ကုန်မှာ ရေဆိုရင်လည်: မီးလာမှ အသည်းအသန် ပြေးတင်ရတယ်။ မီးလာရင် ဝိုင်းသုံးကြလို့ မီးအားကျသွားပြန်ရင်လည်: ရေတင်လို့ မရတော.ပြန်ဘူး။ မီးအားကောင်းချိန် စောင့်ပြီ: ရေတင်ရတာ အလုပ်တလုပ်။ ဂျိုးဖြူရေ သွယ်ထားပေမယ်. လာတချက် မလာတချက်ပါပဲ။ ဒါပေမယ်. ရေခွန်ကတော. လတိုင်းဆောင်ရတယ်။ စင်ကာပူမှာတော. ရေတင်ရတာတို. မရှိပါဘူး။ မလေးရှားက ဝယ်သုံးရတာမို့ ကြိုက်သလောက်သုံး ကျသလောက်ပေးပါပဲ။ စွန့်ပစ်ရေတွေကို recycle လုပ်ပြီ: သုံးတာမို့ ကလိုရင်း များပါတယ်။ နောက်ဆိုရင် မလေးရှားက ရေမဝယ်ရအောင် ရေကာတာ ဆောက်နေတယ်။
ရေကာတာဆိုလို့ မြန်မာပြည်မှာ ရေကာတာ အလွန်ပေါပါတယ်။ နေ့စဉ် သတင်းထဲမှာ ရေကာတာတွေ၊ ဆည်တွေ ဖွင့်လှစ်နေတာ တွေ့ရတယ်။ ဒါတွေ တကယ် အသုံးဝင်ရဲ.လား ဆိုတာတော. တို.မသိပါဘူး။ ငယ်ငယ်တုန်းကတော. ငသိုင်းချောင်း ဆည်ကျိုးတာ တီဗီမှာ မြင်ဘူးတယ်။ ကြောက်စရာကြီ:။ အိမ်တွေ အကုန်မြုပ်သွားတာ ခေါင်းမိုးလောက်ပဲ မြင်ရတယ်။ တော်တော်ကြာတယ်။ ၂ပတ်နီးပါးလောက်မှ ရေကျသွားတယ်။
ဒီလို လူမှုပြသာနာတွေကို ဘယ်လို ဖြေရှင်းရမယ် ဆိုတာ ပညာရှင်တွေမှာတော. အဖြေရှိမယ် ထင်ပါတယ်။ တို.ကတော. တို.မြင်တာကို ပြောပဲ ပြောတတ်တယ်။
ကောင်းမွန်တဲ. လူနေမှု အဆင့်အတန်:ကို မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ။
(ဖေမြင့်ရဲ. "မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ သေချာပြီလား" စာအုပ်မှ heartထိတဲ. စာသားလေးတွေကို ကူးယူဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။)
ဘုရားသခင်ဟာ အမေတို.ရဲ. အရည်အချင်းတွေကို စမ်:သပ်ချင်လို့ အခက်အခဲတွေ၊ ဆင်းရဲဒုတ်ခတွေ အမေတို.ဆီ ပို့ပေးတာ သားရဲ.။ ဒါပေမဲ. တစ်ဖက်ကလဲ ဒါတွေရင်ဆိုင်ဖို. လက်နက်တွေ အမေတို.မှာ တပ်ဆင်ပေးထားသေးတယ် ။ မျှော်လင့်ချက်တို.၊ ယုံကြည်ချက်တို.၊ စိတ်ကူ:အိပ်မက်တို. ဆိုတာတွေပေါ့။ အဲဒါတွေ ရှိနေသမျှ ဘာမှကြောက်စရာ မလိုဘူး။ အဲဒါတွေ စွန့်ပစ်လိုက်ပြီဆိုတော.မှသာ အရာရာ ဆုံးရှုံးတာ။ အမေ့သား မှတ်ထား၊ သားဘဝတလျှောက် သားရဲ. မျှော်လင့်ချက် ယုံကြည်ချက်တွေ သားရဲ. စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေကို ဘယ်အရာမှ ဘယ်ကိတ်စကြောင့်မှ မပျောက်ပျက် မဆုံးရှုံးစေနဲ. သား။
ဘုရားသခင်နဲ. တွေ့ရင် ကွန်ပလိမ်: တက်ချင်ပါတယ်။ ဘာလို့ ညဏ်ကောင်းတဲ. တော်တဲ. စန်:ထွန်းအဖြစ် မဖန်တီးခဲ.ပါလိမ့်။ ဘုရားသခင် မတရားဘူး။
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဆီမှာတော. ကွန်ပလိမ်: တက်လို့ မရပါ။ အကြောင်းတရားကင်းသော အကျိုးတရားမရှိလို့ ဟောထားတာကိုး။